CO2 စှနျ့ထုတျမှုမှာ အိတျဇောပိုကျထကျပိုသာနတေဲ့ တာယာမြား - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ကားတာယာတှကေ ကားအိတျဇောလိုမြိုး မီးခိုးငှစှေ့နျ့ထုတျတဲ့နရောမဟုတျလို့ ပတျဝနျးကငျြညဈညမျးမှုကိုမဖွဈစနေိုငျဘူး ဆိုတဲ့အခကျြကို စာဖတျသူအနနေဲ့ လကျခံမှာလား? ငွငျးမှာလား?
အမြားစုကတော့ အလှယျလေးလကျခံလိုကျမယျလို့ပဲ ထငျမိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီစကားက တကယျတမျးမှနျကနျနတောတော့ မဟုတျပါဘူး။ တာယာတှကေဖနျတီးနိုငျတဲ့ ညဈညမျးမှုဟာ ကြှနျတျောတို့ထငျထားတာထကျ အမြားကွီးပိုပါတယျ။
ဒီအကွောငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ကားတာယာတှကေထှကျတဲ့ emission ပမာဏဟာ ကားအိတျဇောပိုကျကထှကျတဲ့ emission ပမာဏထကျ အဆ ၁၀၀၀ လောကျပိုမြားနကွေောငျး Emissions Analytics အဖှဲ့က မကွာသေးခငျလလေ့ာဆနျးစဈထားမှုတဈခုမှာ ဖျောပွလိုကျပါတယျ။ ရှလြေှ့ောကျထုတျလုပျရောငျးခသြှားမယျ့ကားမှနျသမြှ tailpipe မဲ့ကားတှဖွေဈလာဖို့ ရညျမှနျးကွိုးစားနတေဲ့ဥရောပနိုငျငံတခြို့အနနေဲ့တော့ ဒီလလေ့ာမှုရလဒျအသဈကွောငျ့ ဖွရှေငျးစရာပွဿနာတဈခု ထပျရလိုကျသလိုပါပဲ။
ကိုယျတိုငျက မီးခိုးမစှနျ့ထုတျပမေယျ့လညျး တာယာတှရေဲ့ ယိုယှငျးပကျြစီးမှုဟာ ပတျဝနျးကငျြညဈညမျးမှုတှဖေနျတီးဖို့ အဓိကအရငျးခံဖွဈနပေါတယျ။ လမျးပျေါမှာ ကားဘီးကိုစလှိမျ့လိုကျပွီဆိုတာနဲ့ တာယာအရညျအသှေးကစလြော့ပွီး တာယာစအမှုနျအမှားလေးတှကေလညျး မွကွေီးထဲနဈဝငျသှားပါတယျ။ Non-exhaust Emission (အိတျဇောမဲ့အညဈအကွေး) တှကေိုဖနျတီးနတေဲ့ ကားအစိတျအပိုငျးတှထေဲမှာ တာယာနဲ့ ဘရိတျတှအေပွငျ လမျးမကျြနှာပွငျအခငျးပါ ပါဝငျနတေယျလို့လညျး Emissions Analytics က ဆိုပါတယျ။
အရညျအသှေးမွငျ့တာယာတှတေပျဆငျထားတဲ့ ဥရောပ hatchback တဈစီးကို မောငျးနှငျစမျးသပျခဲ့တဲ့ Emissions Analytics ရဲ့လလေ့ာမှုမှာ 1 km မောငျးနှငျပွီးတိုငျး အညဈအကွေး 5.8 gm (or) 0.62 ml တိုငျးအညဈအကွေး 0.16 ounc ကို တာယာတှကေစှနျ့ထုတျနကွေောငျးတှရှေိ့ခဲ့တာဖွဈပွီး ဒါဟာ tailpipe emission limit ကို 0.0045 gm/km လို့သတျမှတျထားတဲ့ ဥရောပစံညှနျးနဲ့ယှဉျကွညျ့လိုကျရငျ အတျောလေးကိုကှာဟတဲ့ပမာဏလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ Driver Seat ဘကျကတာယာတှရေဲ့လပေေါငျလြော့နမေယျဆိုရငျ ဒါမှမဟုတျ Driver Seat ဘကျကတာယာတှဟောအရညျအသှေးမပွညျ့မီနဘေူးဆိုရငျလညျး လမျးမကျြနှာပွငျနဲ့ တာယာတှရေဲ့ထိတှမှေု့က ပိုကွမျးတမျးဆိုးရှားလာပွီး Emission ပမာဏကို ပိုမြားလာစတောကိုလညျး သိလာခဲ့ကွပါတယျ။
CO2 Emission မရှိ ပတျဝနျးကငျြညဈညမျးမှုမဖွဈစနေိုငျတာတှကွေောငျ့ လတျတလောမှာ လူပွောမြား ခတျေစားနတေဲ့ EV တှကေကော...? လလေ့ာမှုသဈရဲ့ရလဒျအရ ကားဝနျပိုလေးလလေေ တာယာပကျြစီးမှုပိုမွနျပွီး Emission ပိုမြားလလေေ ဖွဈလို့ တခွားအရှယျတူကားတှထေကျအလေးခြိနျပိုမြားတဲ့ EV တှဟောလညျး လုံးဝပွီးပွညျ့စုံတဲ့အဖွဖွေဈမလာသေးဘူး လို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။
CO2 စွန့်ထုတ်မှုမှာ အိတ်ဇောပိုက်ထက်ပိုသာနေတဲ့ တာယာများ
ကားတာယာတွေက ကားအိတ်ဇောလိုမျိုး မီးခိုးငွေ့စွန့်ထုတ်တဲ့နေရာမဟုတ်လို့ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့အချက်ကို စာဖတ်သူအနေနဲ့ လက်ခံမှာလား? ငြင်းမှာလား?
အများစုကတော့ အလွယ်လေးလက်ခံလိုက်မယ်လို့ပဲ ထင်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစကားက တကယ်တမ်းမှန်ကန်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တာယာတွေကဖန်တီးနိုင်တဲ့ ညစ်ညမ်းမှုဟာ ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထက် အများကြီးပိုပါတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကားတာယာတွေကထွက်တဲ့ emission ပမာဏဟာ ကားအိတ်ဇောပိုက်ကထွက်တဲ့ emission ပမာဏထက် အဆ ၁၀၀၀ လောက်ပိုများနေကြောင်း Emissions Analytics အဖွဲ့က မကြာသေးခင်လေ့လာဆန်းစစ်ထားမှုတစ်ခုမှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ရှေ့လျှောက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသွားမယ့်ကားမှန်သမျှ tailpipe မဲ့ကားတွေဖြစ်လာဖို့ ရည်မှန်းကြိုးစားနေတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတချို့အနေနဲ့တော့ ဒီလေ့လာမှုရလဒ်အသစ်ကြောင့် ဖြေရှင်းစရာပြဿနာတစ်ခု ထပ်ရလိုက်သလိုပါပဲ။
ကိုယ်တိုင်က မီးခိုးမစွန့်ထုတ်ပေမယ့်လည်း တာယာတွေရဲ့ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုတွေဖန်တီးဖို့ အဓိကအရင်းခံဖြစ်နေပါတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ ကားဘီးကိုစလှိမ့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ တာယာအရည်အသွေးကစလျော့ပြီး တာယာစအမှုန်အမွှားလေးတွေကလည်း မြေကြီးထဲနစ်ဝင်သွားပါတယ်။ Non-exhaust Emission (အိတ်ဇောမဲ့အညစ်အကြေး) တွေကိုဖန်တီးနေတဲ့ ကားအစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာ တာယာနဲ့ ဘရိတ်တွေအပြင် လမ်းမျက်နှာပြင်အခင်းပါ ပါဝင်နေတယ်လို့လည်း Emissions Analytics က ဆိုပါတယ်။
အရည်အသွေးမြင့်တာယာတွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ ဥရောပ hatchback တစ်စီးကို မောင်းနှင်စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ Emissions Analytics ရဲ့လေ့လာမှုမှာ 1 km မောင်းနှင်ပြီးတိုင်း အညစ်အကြေး 5.8 gm (or) 0.62 ml တိုင်းအညစ်အကြေး 0.16 ounc ကို တာယာတွေကစွန့်ထုတ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒါဟာ tailpipe emission limit ကို 0.0045 gm/km လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဥရောပစံညွှန်းနဲ့ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် အတော်လေးကိုကွာဟတဲ့ပမာဏလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Driver Seat ဘက်ကတာယာတွေရဲ့လေပေါင်လျော့နေမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် Driver Seat ဘက်ကတာယာတွေဟာအရည်အသွေးမပြည့်မီနေဘူးဆိုရင်လည်း လမ်းမျက်နှာပြင်နဲ့ တာယာတွေရဲ့ထိတွေ့မှုက ပိုကြမ်းတမ်းဆိုးရွားလာပြီး Emission ပမာဏကို ပိုများလာစေတာကိုလည်း သိလာခဲ့ကြပါတယ်။
CO2 Emission မရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေနိုင်တာတွေကြောင့် လတ်တလောမှာ လူပြောများ ခေတ်စားနေတဲ့ EV တွေကကော...? လေ့လာမှုသစ်ရဲ့ရလဒ်အရ ကားဝန်ပိုလေးလေလေ တာယာပျက်စီးမှုပိုမြန်ပြီး Emission ပိုများလေလေ ဖြစ်လို့ တခြားအရွယ်တူကားတွေထက်အလေးချိန်ပိုများတဲ့ EV တွေဟာလည်း လုံးဝပြီးပြည့်စုံတဲ့အဖြေဖြစ်မလာသေးဘူး လို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။
TYRES & TUBE REPAIRING အတွက်လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၈၇ ခုကိုရှာဖွေရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။